Karate: “Nahafa-po ny fifaninanam-pirenena”, hoy i Ogasawara | NewsMada
Karate: “Nahafa-po ny fifaninanam-pirenena”, hoy i Ogasawara
Nambaran’i Ichiro Ogasawara, ambasadaoron’i Japon, miasa sy monina eto Madagasikara, nandritra ny fanatrehany ny fifaninanam-pirenena, taranja karate, natao ny alahady 13 janoary lasa teo, fa efa avo lenta ny karateka malagasy raha tarafina amin’ny zava-bitan’izy ireo nandritra iny fiadiana ny tompondaka nasionaly iny. Tsy ny fahaiza-manaon’ny mpikatroka malagasy ihany no nankasitrahany fa ny fanomanana sy ny kalitaon’ny fifaninanana rehetra mihitsy. Vitsy, hoy izy, ny firenena mahavita zavatra misongadina sy avolenta toy ireny vitan’ny federasiona malagasy ireny.
Fa anisan’ny nideran’i Ichiro Ogasawara indrindra ihany koa ny “fair play” sy toe-panahy ananan’ny Malagasy, amin’ny fanajan’ny mpikatroka tsirairay ny mpifanandrina, amin’ny alalan’ny fihetsika feno fahendrena. Teo am-pamaranana ny fanambarana nataony tao amin’ny pejy manokan’ny masoivoho japoney, niarahaba sahady ary nirary soa ny mpiangaly karate malagasy ity ambasadaoro japoney ity, amin’ny fiatrehana ny fifaninanana any Tokyo ny taona 2020.
Tsiahivina fa haiady ifotoran’ny firenena japoney ary niorina tany mihitsy ny karate. Anisan’ny taranja hifaninanana amin’ny “Lalao olympika” sy ny “Paralympika”, hatao any Tokyo ny taona 2020, ny karate.